#Sirna Ethiopia Falaasamani Ida’uu(መደማር) Diige #Filannoon Biyyaalessaa Ethiopia Gonkumaa Hin Ijaaru. – Kichuu
HomeAfaan OromooNews#Sirna Ethiopia Falaasamani Ida’uu(መደማር) Diige #Filannoon Biyyaalessaa Ethiopia Gonkumaa Hin Ijaaru.
#Sirna Ethiopia Falaasamani Ida’uu(መደማር) Diige #Filannoon Biyyaalessaa Ethiopia Gonkumaa Hin Ijaaru.
#SirnaEthiopia Falaasamani Ida’uu(መደማር) Diige #FilannoonBiyyaalessaaEthiopia Gonkumaa Hin Ijaaru.
Waaqoo Nooleetiin=== 24, 03, 2021
#Ethiopian Biyya Osoo Hin Taane Sirna Turte; Byyaa hin turre, biyyaas miti, biyya ta’uufis carraa hin qabdu.
Ethiopian sirna abbaa irree bulchitoota sirnichaatiin diigamtee dha. Addatti Sirna Ethiopia kan diigee bittannessse Falaasama ida’uti.
Ethiooia diiguu keessatti qoodni guddaan Ida’uun keenne BISHAANII fi ZEEYTA walitti ida’uun waan gonkumaa hin yaadamne ” ኢትዮጵያ ላ ዛለለም ትኑር!” dhaadannoo jedhuun Lola labsuu dha.
Ethiopia keessatti lolli falaasama መደማር n eegale golgaa Agoobara Heeraa bara 1987 E.C tolfame diigee, Naannolee maqaa federaalizimii sabdaneesasaan daldalan diigee ifaa fi cina galaan Lola dhaabbataa (Conventional war) tigraay irratti labsuun duguuggaa sanyii dhaqqabsiisuu fi Guutummaa biyyatti kesssaahuu Oromiyaa keessatti komandipost jedhuun duguuggaa sanyii gaggessaa tureera, jiras.
keessattu Oromiyaa keessatti kan deemaa turee fi jiru Lola walitti fusfiinsaan ta’aa ture, Lola Oromiyaa fi Ethiopia jidduuti. Lolli amma Kaaba Oromiyaa lammiilee Oromiyaa Walloo irratti banames itti fufiinsa isaa Lola Ethiopia kufte deebisanii kaasuu, Lola akeeka Oromiyaa diiguu fi dhabamsiisuu biyya Oromiyaa fi daangaa Oromiyaa humnaan cabsanii fudhachuuti. Kun hundi isaatuu Itti fufuma Ethiopia jiraachisuu amma Project መደማር n socho’aa jiruu dha.
waan ta’eef, Biyya Filannoon ummataaf qophaaye Ajjeechaa, saamicha fi hidhaa ta’etti abjuun jiru of baraaruu dha. Sirna Ethiopia diigame keessatti ummattoonni baraaramuu kan danda’an hunduu qe’ee isaa irratti abba ta’uun of tiksuu dha. Biyyi mootummaa hin qabdu, kan maqaa mootumaatiin daldalaa jiru Shiftaa maafiyaa PP ti.
OMN Horn: Odeessaalee Har’aa (Bit 25, 2021)
Oromoon paarlaamaa keessatti rakkoo isaa waan himateef adabamuu qaba jechaa jiran. Gaafa isaanii garuu booyichaan dachii gara galchu. Akeekni gabaasa kanaa, lammata Oromoo paarlaamaa keessatti gaafii akka hin gaafanne gochuufi. Takkaa sodaachisuun takkaa himachuun. Gabaabumatti rakkoon Oromoo dubbatamuu hin qabu jechaa jiru.
Ilmaan Oromoo lamaan kan dheengadda paarlaamaa sobduu keessatti haqa dubbatan irratti duulamaa jira. Doorsifni irratti hammaachaa jira. Yeroo isaan haqa saba isaanii imimmaaniin hudhamaa dubbatan Abiy Ahmad kan maqaa Oromootiin nagadu afaan keessa isaan dhahe. Laalaa saba Oromoo isaan dubbatan ganee warra hammeenya isaanirratti raaw’ate faarse. Kan waraaname abaaree isa waraane dhaadessee duukaa dhaabate.
Kanarraa ka’uun har’a abbootii taaytaa naannoo Amaaraa gurguddaa dabalatee warri Oromoo jibbu hundi jara lamaan sanitti dhaadataa jira. Komishinarri Polisii Naannoo Amaaraa Abbaree Addaamuu ibsa miidiyaaf kenne keessatti ”jarri kun Itoophiyaawii miti jechuu bira darbee dhala namaa hin madaalan jechuun arrabse. Kanatti aanee maaltu akka ilmaan sabaa kana mudachuu malu tilmaamuun barbaachisaa dha. Ummanni keenya kan bakka isaan jiraatan beektan wal gurmeessaa tika jabaa godhaafii. Jabaa keenya waltajjii irratti mirga saba isaaf falmu nyaachuun aadaa jara kanaati waan taheef, jabaa keessan jabeeffadhaa. Sabni qadrii jabaa ofii hin beekne jabaa maseenee hafa. Sana nu haa baraaru!
Suuraan kan dheengaddaati
Womaa gochuun dandeennuu dhiigaa kee rabbiin lafan gatinii Haacceee ilma saba ufiitiif woreegameee!!!!!!
Konyaa Lixa Shawaa Ona Jibaat keessatti kan argamu Bosonni Jibaat, ibidda
Dhaamsa of eeggannoo fi Oromiyaa tiksuu! Uummata Oromoo hundaaf,